ဘယ်လိုလာဇလို Biro ကဘောခြံ၏သမိုင်းကိုပြောင်းလဲ
တီထွင်သူလာဇလို Biro နှင့်ကဘောခြံ၏တိုက်ပွဲ
"ဟုသူကတစ်ဦးသည်သူ၏လက်၌ကလောင်, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပညာမရှိခဲ့သည့်အခါသူကရှိခဲ့သည့်အခါအဘယ်သူမျှမကပိုမိုက်မဲခဲ့ပါသည်။ " ရှမွေလသည်ဂျွန်ဆင် ။
လာဇလို Biro အမည်ရှိဟနျဂရေီသတင်းစာဆရာ 1938. Biro အတွက်ပထမဦးဆုံးကဘောဘောပင်သတင်းစာပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောမှင်စက္ကူ Smudge-အခမဲ့ထွက်ခွာအလျင်အမြန်အခြောက်လှန်း, ဒါကြောင့်သူကမှင်၏တူညီသောအမျိုးအစားသုံးပြီးကလောင်ဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ထူမှင်ပုံမှန်ကလောင် NIB ကနေစီးဆင်းမဟုတ်ဘူး။
Biro အမှတ်အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးအကြံကိုကြံခဲ့ရတယ်။ သူဟာသူ့ရဲ့အစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့ဆောင်သောသေးငယ်တဲ့ဘောလုံးကိုနဲ့သူ့ရဲ့ကလောင်သငျ့အားဖြင့်ဒါကိုပြု၏။ အဆိုပါဘောပင်စက္ကူတစ်လျှောက်တွင်ပြောင်းရွှေ့သကဲ့သို့, ဘောလုံးမှင်သည့်အရာတစ်ခုကနေမှင်တက်ကောက်နေနှင့်စက္ကူပေါ်မှာထွက်ခွာ, လှည့်။
ယင်းကဘောဘောပင်၏ဤနိယာမတကယ်ပြန်သားရေအထိမ်းအမှတ်ဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အသံကျယ်ယောဟနျသကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ 1888 မူပိုင်ခွင့်မှစတငျရပေမယ့်ဒီမူပိုင်ခွင့်စီးပွားဖြစ် unexploited ဖြစ်ခဲ့သည်။ Biro ပထမဦးဆုံး 1938 ၌သူ၏ကလောင်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်သူနဲ့သူ့အစ်ကို 1940 ရှိပြောင်းရွှေ့အခြေချပြီးနောက်သူအာဂျင်တီးနားအတွက်ဇွန်လ 1943 ခုနှစ်တွင်အခြားမူပိုင်ခွင့်များအတွက်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
ဗြိတိသျှအစိုးရကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း Biro ရဲ့မူပိုင်ဖို့လိုင်စင်အခွင့်အရေးများဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှတော်ဝင်လေတပ်တိုက်လေယာဉ်များတွင်မြင့်မှာပေါက်ကြားမဟုတ်ကြောင်းအသစ်တစ်ခုကလောင်စမ်းရေတွင်း၌ခြံလုပ်ခဲ့တဲ့လမ်း planes လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ လေတပ်များအတွက်ကဘောရဲ့အောင်မြင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဟာထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်သို့ Biro ရဲ့ခြံဆောင်ခဲ့လေ၏။ ကံမကောင်းစွာပဲ Biro တစ်ဦးကိုဆည်းပူးတစ်ခါမျှ အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့် ကသူ၏ဘောပင်အဘို့, ဒါကြောင့်အခြားစစ်တိုက်မယ့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုအဆုံးသတ်ပင်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။
တိုးတက်မှု၏တစ်ဦးကအများကြီး Biro ရဲ့တီထွင်မှုဖို့အခွင့်အရေးများကျော်တစ်ဦးစစ်တိုက်ခြင်းငှါဦးဆောင်နှစ်ပေါင်းများစွာယေဘုယျအားဖြင့်ခြံမှဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ Biro ညီအစ်ကိုညီရှိသူတို့၏မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်အာဂျင်တီးနားအတွက်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ Eterpen Company က Biro ကလောင်စီးပွားဖြစ်။ က refilling မရှိဘဲတစ်နှစ်ရေးလိုက်လို့စာနယ်ဇင်းသူတို့ရဲ့အရေးအသား tool ကို၏အောင်မြင်မှုကိုချီးကျူး။
ထို့နောက်မေလ 1945 ခုနှစ်, Eversharp ကုမ္ပဏီအာဂျင်တီးနား၏ Biro ခြံမှသီးသန့်အခွင့်အရေးကိုဆည်းပူးရန် Eberhard-တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုးအတူတက်ပူးပေါင်း။ အဆိုပါဘောပင်အဘို့၌ရပ်နေသော "Eversharp, CA," အဖြစ်နာမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ် "ဆံချည်မျှင်သွေးကြောအရေးယူ။ " ဒါဟာလူထုရောင်းအား၏ကြိုတင်မဲအတွက်စာနယ်ဇင်းလဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Eversharp / Eberhard, Eterpen တစ်ဦးချီကာဂိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မီလ်တန် Reynolds ကသဘောတူညီချက်ပိတ်ထားတစ်လထက်လျော့နည်းပြီးနောက်သွားရောက်ကြည့်ရှု Buenos Aires သူတစ်ဦး store မှာခဲ့စဉ် Biro ကလောင်သတိပြုမိနှင့်ဘောပင်တစ်ချောင်းရဲ့ရောင်းအားအလားအလာအသိအမှတ်ပြုဇွန်လ 1945 ၌တည်၏။ သူကနမူနာအဖြစ်အနည်းငယ်ဝယ်ယူ Eversharp ရဲ့မူပိုင်အခွင့်အရေးကိုလျစ်လျူရှုသည် Reynolds ကနိုင်ငံတကာကလောင်ကုမ္ပဏီဖွင့်ဖို့အမေရိကသို့ပြန်သွား၏။
Reynolds ကလေးလအတွင်း Biro ကလောင်ကူးယူနှင့်သူက "Reynolds ကဒုံးပျံက" ဟုခေါ်တွင်ခြင်းနှင့်နယူးယောက်စီးတီးရှိ Gimbel ရဲ့ဌာနစတိုးဆိုင်မှာရရှိနိုင်လုပ်အောက်တိုဘာလ 1945 ၏အဆုံးအားဖြင့်သူ့ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့စတင်ခဲ့သည်။ Reynolds က '' အတုဈေးကွက်မှ Eversharp ရိုက်နှက်ကြောင့်ချက်ချင်းအောင်မြင်ခဲ့သည်။ $ 12,50 တစ်ဦးချင်းစီမှာစျေးနှုန်း, ခြံ၏ $ 100,000 တန်ဖိုးရှိစျေးကွက်အပေါ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ကရောင်းချခဲ့သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံကဝေးနောက်ကွယ်မှမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါမိုင်-Martin Pen ကုမ်ပဏီခရစ်စမတ် 1945 မှာအဲဒီမှာအများပြည်သူပထမဦးဆုံးကဘောခြံရောင်းချခဲ့သည်။
အဆိုပါကဘောကလောင်တစ် Fad ဖွစျလာ
ကဘောခြံ refilling မပါဘဲနှစ်နှစ်ရေးသားဖို့အာမခံချက်နှင့်ရောင်းသူသူတို့ smear-သက်သေပြခဲ့ကြသည်အခိုင်အမာခဲ့ကြသည်။
Reynolds ကနိုင်တစျခုအဖွစျသူ၏ကလောင်ကြော်ငြာ "ရေအောက်တွင်ရေးပါ။ "
ထိုအခါ Eversharp Eversharp တရားဝင်ဝယ်ယူသောဒီဇိုင်းကိုကူးယူဘို့ Reynolds ကတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ယောဟနျသဖွငျ့အဆိုပါ 1888 မူပိုင်အသံကျယ်လူတိုင်း၏တောင်းဆိုချက်များ invalidated ကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမထိုအချိန်ကသိတယ်။ အရောင်းနှစ်ဦးစလုံးပြိုင်ဖက်များအတွက်တဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်, ဒါပေမယ့် Reynolds က '' ကလောင်အမည်ပေါက်ကြားခြင်းနှင့် skip ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏရေးသားဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ Eversharp ရဲ့ကလောင်ဖြစ်စေ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာများအထိအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘောပင်ပြန်၏တစ်ဦးကအလွန်မြင့်မားတဲ့ volume Eversharp နှင့် Reynolds ကနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အဆိုပါကဘောဘောပင် fad စားသုံးသူမပျော်ရွှင်ကြောင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ မကြာခဏစျေးနှုန်းစစ်ပွဲတွေ, အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းထုတ်ကုန်များနှင့် nosedived 1948 အရောင်းအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးကုမ္ပဏီများသည်စိတ်ထိခိုက်မိုးသည်းထန်စွာကြော်ငြာကုန်ကျစရိတ်။ စျေးနှုန်းမေးမြန်းခြင်းမူရင်း $ 12,50 ကလောင်နှုန်းထက်နည်း 50 ဆင့်ကျဆင်းသွား။
Reynolds က '' ကုမ္ပဏီခေါက်အဖြစ်ဤအတောအတွင်းစမ်းရေတွင်း၌ခြံသူတို့ရဲ့အဟောင်းလူကြိုက်များတဲ့နောက်တစ်ကျော့ပြန်လာခံစားခဲ့ရသညျ။
ထိုအခါက Parker ခြံ၎င်း၏ပထမဆုံးကဘောဘောပင်မိတ်ဆက်သည် Jotter, ဇန်နဝါရီလ 1954 အတွက် Jotter အဆိုပါ Eversharp သို့မဟုတ် Reynolds ကခြံထက်ပိုရှည်ငါးကြိမ်ရေးသားခဲ့သည်။ ဒါဟာအချက်အရွယ်အစား, တစ်လှည့်သည့်အရာတစ်ခုနှင့်ကြီးမားသော-စွမ်းရည်မှင် Refill အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးကြောင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ က Parker ထက်နည်းတဲ့နှစျတှငျ $ 2,95 ကနေ $ 8,75 မှစျေးနှုန်းများမှာ 3.5 သန်း Jotters ရောင်းချခဲ့သည်။
1957 အသုံးပြုပုံက Parker ဟာသူတို့ရဲ့ကဘောခြံအတွက်ကိုဆောင်သောအဖြိုက်နက် carbide textured ဘောလုံးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Eversharp နက်ရှိုင်းသောဘဏ္ဍာရေးဒုက္ခကြီးနှင့်စမ်းရေတွင်း၌ခြံရောင်းဖို့နောက်ကျောကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီက Parker ခြံမှ၎င်း၏ကလောင်ဌာနခွဲရောင်း Eversharp နောက်ဆုံးတော့ 1960 ခုနှစ်က၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို liquidated ။
ထိုအခါ BIC လာ
ပြင်သစ် Baron Bich သူ၏နာမအနေဖြင့် '' H ကို '' ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းငါးဆယျစီ 1950 ခုနှစ် BICs ဟုခေါ်တွင်ခြံရောင်းစတင်ခဲ့ပြီး BIC ဥရောပစျေးကွက်၏ 70 ရာခိုင်နှုန်းကိုကျင်းပခဲ့တယ်။
BIC 1958 ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်အခြေစိုက် Waterman ခြံ၏ 60 ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ကအဆိုပါကုမ္ပဏီ 69 ဆင့်အထိ 29 ဆင့်များအတွက်အမေရိကန်ကဘောခြံကိုရောင်း 1960 ဖွငျ့ Waterman ခြံ၏ 100 ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်သည်။
BIC 21 ရာစုအတွင်းစျေးကွက်လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ က Parker, Sheaffer နှင့် Waterman စမ်းရေတွင်း၌ခြံနှင့်စျေးကြီးကဘော၏သေးငယ် upscaling စျေးကွက်ဖမ်းယူ။ လာဇလို Biro ရဲ့ကလောင်၏မြင့်မားလူကြိုက်များခေတ်သစ်ဗားရှင်း, အ BIC Crystal, 14 သန်းကိုအပိုင်းပိုင်း၏နေ့စဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အရောင်းကိန်းဂဏန်းရှိပါတယ်။ Biro ဆဲကမ္ဘာ၏အများဆုံးသုံးကဘောဘောပင်များအတွက်အသုံးပြုသောယေဘုယျနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏လက်ချောင်းဂစ်တာ Play မှအရမ်းအဆီဖြစ်ပါသလား
Barnard College မှာ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ဒုတိယအ Boer စစ်ပွဲ: Paardeberg ၏တိုက်ပွဲ
ဂျာမန် Phonetic စာလုံးပေါင်း Code ကို
အီတလီ preposition Da
တစ်ဦး Professional ကအဆောက်အဦးဒီဇိုင်နာ Be
ဂြာမနျတွင် definite ဆောင်းပါးများ
LaVeyan စာတနျဝါဒမှာ "လူ့အနစ်နာခံ" ၏အချက်အလက်နဲ့မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်
ငါသည်ငါ့ Lug အခွံမာသီးအဘယျသို့အမိန့်ပြားကိုကြပ်သလား?
Power ကဂျက် Carburetors